စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပံ့ပိုးပေးသူကိုသင်ရွေးချယ်သူသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့်မည်သို့တူသနည်း။ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 28, 2014 Douglas Karr
ကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်ရှိရှုပ်ထွေးသည့်နားလည်မှုများအကြောင်းရေးသားခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဆိုတာဘာလဲနှင့်အချို့မျှဝေခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အတွက် B2B စိန်ခေါ်မှုများ စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဒါ Marketo ကနေ infographicအတူတက်ပူးပေါင်းသူကို Software ကိုအကြံဥာဏ်အဖွဲ့အစည်းများ ၀ ယ်ရန်မည်သို့မောင်းနှင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများ၏ရလဒ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ပေါင်းစပ်ထားကြောင်းဤအချက်အလက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စနစ်များ.
၀ ယ်သူ၏ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အကဲဖြတ်နေကြောင်းသင်သိပါသလား။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နှစ်စဉ်ပျံ့နှံ့လာသည်ကိုငါတို့သိသောကြောင့်ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမအံ့သြစေပါ။ အပြိုင်အဆိုင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လိုအပ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများက ပို၍ နားလည်လာသည်။ နောက်ထပ်သော့ချက်ကျသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုအကဲဖြတ်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ဦး ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်တိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ Dayna Rothman၊ Marketo
အဘယ်သူသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် software ကိုရှာဖွေနေသလဲ
အဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် software ကိုရှာဖွေနေသနည်း
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလိုအလျောက်ပံ့ပိုးပေးသူကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသောအကြံပေးချက်သည်ဤအရာသည် ထွက်၍ မမေးမြန်းပါနှင့် အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ။။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပံ့ပိုးပေးသူအားလုံးသည်သူတို့၏အင်္ဂါရပ်များ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်၎င်းတို့ပံ့ပိုးပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်တွင်ကွဲပြားသည်။ ကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ၀ ယ်ယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ရောင်းရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်မြေပုံထုတ်ရန်ဖြစ်ပြီးထိုဖြစ်စဉ်များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်မြေပုံထုတ်ရန်ဖြစ်သည် သင်၏ဖြစ်စဉ်များကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသည့်ဆော့ဗ်ဝဲကိုရွေးချယ်ပါ။ ဘဏ်ကိုအဖြေတစ်ခုနဲ့မချိုးပါနဲ့၊ သင်လိုအပ်လိမ့်မယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အရင်းအမြစ်များအများကြီးပိုလိုသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုစာရင်းပေးရုံထက်မက!
Tags: ဖြစ်စဉ်များကိုအလိုအလျောက်ခဲစီမံခန့်ခွဲမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် features တွေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် software ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းစျေးကြီးsoftware အကြံဥာဏ်